Blaogy/Bolongana hanehoan-kevitra : Torolalan’i Global Voices hiarovan-tena · Global Voices teny Malagasy
Blaogy/Bolongana hanehoan-kevitra : Torolalan’i Global Voices hiarovan-tena
Voadika ny 01 Febroary 2008 8:38 GMT
Vakio amin'ny teny Português, हिन्दी, বাংলা, Español, English
Global Voices Advocacy dia faly mampilaza antsika ny fahavitan’ny torolalana fianarana andiany faharoa azo izay mifototra amin'ny fidifiana sivana amin’ny aterineto, famahanam-bolongana tsy fantatra anarana sy tsy fanta-toerana ary fahaiza-mampiasa ny fitaovana ilaina amin’ny aterineto hisian’ny fiovana ara-politika sy ara-piaraha-monina.
Blog for a Cause!: The Global Voices Guide of Blog Advocacy (Blaogy/Bolongana hanehoan-kevitra !: Torolalan’i Global Voices hiarovan-tena) dia mitari-dalana ny mpanentana mafana fo hampiasa Blaogy/Bolongana ho anisan’ny fitaovana entina hanoherana ny tsy rariny mitranga manerantany. Afa-manampy ny ‘mpitolona’ (na mpanentana) amin’ny fomba maro amin’ny famahanam-bolongana. Fomba haingana sady tsy mandany fotoana ilazana fisiana anaty aterineto, hampielezana vaovao momba ny fanehoan-kevitra na filazan-kevitra iray, ary entina hanerena ny tompon’andraiki-draharaha mpanapa-kevitra.
Roa sosona ny tanjon’ny Blog for a Cause!: (Blaogy/Bolongana hanehoan-kevitra): hampahalala sy hanainga fanahy. Heverina ho mora takarina sy mora ampiharina ny torolalana, Manome fanavazavana mora arahina maro ho fanampiana ny ‘mpanentana mpitolona’ amin'ny fenitra na hevitra iray arovany.
Mizara dimy ny torolalana:
1. Ny Fanontaniana mpitranga matetika amin’izay ataon’ny ‘blog advocacy’(Blaogy/Bolongana hiarovantena na misolo vava na mampahery)
2. Ny Fanalahidim-pahombiazana dimin’ny ‘advocacy blog’ (bolongam-pampaherezana)
3. Ny dingana efatra arahina amin’ny fananganana ‘advocacy blog’ (na bolongam-panehoan-kevitra)
4. Ny fomba hahatongavan’ny blaogy/bolongana ho fampiraisana ny mpanolo-tena mazoto
5. Fampianarana ny ‘mpanentam-bolongana’ ho voaro na dia eo ampivoizana aza
Ankoatra ny fanavazavana efa nomena teo ambony dia ahitana ohatra ‘advocacy blogs’ (bolongam-panehoan-kevitra) maro manerantany koa ao hahitan’ny mpamaky topimaso amin’izay azo atao (rehetra). Samy manana ny tanjony ireo ‘advocacy blogs’ ireo, miainga amin'ny fanafahana ilay mpamaham-bolongana Saodiana mankany amin'ny fiarovana ny tontolo iainana any Hong Kong sy ny fanoherana ny ady mitranga any Darfur.
Nosoratan’i Mary Joyce, izay mpianatry ny ‘fanentanana niomerika’ mipetraka any Boston, ny torolalana ary narindran’ny Global Voices Advocacy, tetikasam-panoheran-tsivana tarihin’ny Global Voices online.
Raha toa hitanao fa ilaina tokoa amin’ny fananganana bolongam-panehoan-kevitra ity torolalana ity, dia miangavy anao izahay handefa imailaka aminay hahafantaranay (fa misy ny liana amin'ny tetikasa).
Azonao trohina ny Blog for a Cause!: amin’ny teny anglisy ary ampio izahay handika azy amin’ny tenim-pirenenao.
Raha tianao ny hahazo fanazavana bebe kokoa dia miangavy anao izahay hiresaka na hifanoratra amin’i Mary amin’ity adiresy ity MaryCJoyce [ at ] gmail [ dot ] com na amin'ny mpandrindran’i Global Voices Advocacy atoa Sami Ben Gharbia amin’ity adiresy ity advocacy [ at ] globalvoicesonline [ dot ] org
Tsara be re ry Jentilisa an.
Ary ianareo hoe tena rapide be loatra foana an…
04 Febroary 2008, 18:37